Fitsaboana an-trano 8 voaporofo fa fitomboan'ny volo - Dia Singam-Bolo
Fahasalamana Ara-Tsaina Mpahay Nahatratra Fitaovana Pets Fironana Fitiavana Firaisana Fomba Fanamboarana Ao An-Tokantrano Indian Iraisam-Pirenena
Fitsaboana an-trano 8 voaporofo fa fitomboan'ny volo
Tahaka ny ilain'ny hoditrao fikolokoloana sy famelomana sakafo, ny tresesanao koa dia mila ny fiahianao feno fitiavana. Fototra iray fahazarana fikolokoloana volo afaka mandeha lavitra amin'ny fiantohana volo salama . Mitandrina kosa ny manam-pahaizana manoloana ny fiankinan-doha amin'ny vokatra simika, raha ny momba ny fikolokoloana drafitra fikolokoloana volo matanjaka. Fa kosa, mitadiava fanafody voajanahary - raha ny marina dia afaka mahita ny sasany amin'ireo vahaolana volo ao an-tranonao ianao. Misy fangaro maromaro, izay mora azo ao an-dakozinao, izay afaka miady amin'ny fahalavoan'ny volo, ny dandruff ary ny aretin-doha. Ireto ny sasany amin'ireo mahomby indrindra fanafody an-trano ho an'ny fitomboan'ny volo mety ho mora ampiasaina amin'ny volonao izany.
1. Ahoana no fanasitranana any an-trano amin'ny fitomboan'ny volo amin'ny fanampiana an'i Amla?
roa. Azo atao ve ny manasitrana ny fitomboan'ny volo amin'ny alàlan'ny menaka tena ilaina?
3. Inona avy ireo fanafody tsara indrindra any an-trano amin'ny fitomboan'ny volo amin'ny fanasitranana voanio
Efatra. Ny fanafody an-trano amin'ny fitomboan'ny volo amin'ny alàlan'ny menaka Castor dia misoroka ny olan'ny volo?
5. Azontsika atao ve ny miantehitra amin'ny fitsaboana any an-trano amin'ny fitomboan'ny volo miaraka amin'i Shikakai sy i Reetha?
6. Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fanasitranana any an-trano amin'ny fitomboan'ny volo miaraka amin'ny Aloe Vera ho an'ny volo?
7. Ahoana ny fomba hanampian'ny fanafody any an-trano ny vinaingitra Apple Cider?
8. Ahoana no fomba ahafahantsika manamboatra fanafody any an-trano amin'ny fitomboan'ny volo amin'ny sarontava atody?
9. FAQ: Fanasitranana any an-trano amin'ny fitomboan'ny volo
Ireto misy fanafody roa ao an-trano, starring amla, ho an'ny volo simba:
sarimihetsika tsara indrindra hijerena miaraka amin'ny ankohonanao
Afangaro ao anaty vilia iray ny 2 sotrokely vovoka amla ary vovoka shikakai 2 sotrokely sy rano kely kely hanaovana paty malama. Aza avela ho rano izy. Apetaho eo amin'ny hodi-dohanao sy ny volonao ny mifangaro ary andraso mandritra ny 45 minitra. Aorian'izany dia sasao amin'ny rano mahazatra ny volonao. Afaka manaraka an'io fanao io indray mandeha isan-kerinandro ianao.
Afanaina 2 sotrokely ny menaka voanio mandra-pahatonga azy ho volontany. Manampia vovoka amla eran'ny sotrokely ary avelao hangatsiaka kely ny fangaro. Manotra ny hodi-dohanao miaraka amin'ity mandritra ny 10 minitra ary miandry antsasak'adiny na roa. Esorina ny shampooing. Mampiasà shampooing malefaka. Azonao atao ny manaraka an'io fanazaran-tena indroa isan-kerinandro.
Ahoana ny fiasan'ny amla : Heverina ho fampiroboroboana ny tsimatimanota voajanahary. Raha ny marina, milaza ny manam-pahaizana fa io no akora voajanahary tadiavina indrindra amin'ny fivelaran'ny volo. Fa maninona Izany dia satria ny amla dia misy oodles misy asidra matavy tena ilaina, izay voalaza fa manamafy ny folikelin'ny volo. Ary koa, ny mihoatra ny Vitamina C amin'ny amla dia mety hisorohana ny volondoha aloha loatra. Izy io koa dia avo amin'ny vy sy antioxidant mahery - ellagic, asidra galika ary carotene. Ity farany dia manatsara ny fivezivezena ra manodidina ny loha ka mandrisika ny fitomboan'ny volo. Inona koa, ireto koa dia afaka miady dandruff .
2. Afaka manampy ny fanafody an-trano ve ny fitomboan'ny volo amin'ny alàlan'ny menaka tena ilaina?
ny fanafody an-trano amin'ny olan'ny volo tsy maintsy misy menaka esansiela. Ireto misy karazana sasany izay alaina tombony amin'ny majika ho an'ny volo:
Rosemary sy lavender
Afanaina menaka oliva 2 sotrokely ary ampio avokado antsasaky ny sotrokely ao anaty menaka. Kapohina izy ireo. Manampia tantely sy atody kely. Mifangaro. Ampio menaka rosemary sy lavedar - 10 nilatsaka tsirairay. Apetaho amin'ny hodi-dohanao sy ny volonao ny mifangaro ary andraso mandritra ny 45 minitra. Esorina ny shampooing. Andramo indray mandeha isan-kerinandro ity.
Ahoana ny fiasan'ny rosemary sy ny lavender: Rosemary dia manana agents anti-inflammatoire antsoina hoe Carnosol - ity dia singa matanjaka iray afaka manampy amin'ny fandanjana ny hormonina. Izy io dia afaka mampiroborobo ny follicle, amin'izay dia mampihena ny fahafahan'ny volo hilatsaka. Ny linalool sy ny acétate linalyl misy ny lavender dia afaka manampy amin'ny fanamafisana ny fakan'ny volo sy ny follicle manaitaitra, amin'izay mampiroborobo ny volo.
Raha manana loha mangidihidy ianao, ny fanosotra menaka jojoba dia afaka manampy betsaka. Manampy amin'ny fivezivezena ra koa izany.
Azonao atao ny mampiasa jojoba ho toy ny mpanamboatra fanafody any an-trano ihany koa. Apetaho amin'ny volo izany aorian'ny shampooing.
Afangaroy ny atody atody, ny menaka jojoba iray sotro, tantely iray sotrokely ary ranom-boasarimakirana vitsivitsy. Apetaho eo amin'ny hodi-dohanao sy ny volonao ny mifangaro ary andraso mandritra ny 45 minitra. Aorian'izay dia esory ny shampooing.
fotoana tanora: am-piandohana
Ahoana ny fiasan'ny jojoba : Heverina ho emollient mampitony. Ary matetika izy io dia ankasitrahana ho fitsaboana fialan-tsasatra mahomby ho an'ny volo maina. Izy io koa dia manan-karena amin'ny fananana anti-fungal izay tena ilaina amin'ny fitazonana ny loha amin'ny mavokely fahasalamana. Jojoba dia afaka manampy anao amin'ny fanesorana ireo sosona hoditra maty mahasosotra amin'ny hodi-doha - afaka manampy anao koa izy hanary ny dandruff sy loto, avelanao hodi-doha madio. Jojoba koa dia manankarena amin'ny asidra vitamina E, Omega 6 ary 9 ary asidra matavy feno tavy izay miady amin'ny radika maloto manimba izay manimba ny volontsika. Ny menaka volo Jojoba dia afaka manadoka ny folikelin'ny volo koa.
Ny menaka jiriper dia mety ho fanafody an-trano ho an'ny dandruff. Manampia menaka manitra juniper 4-5 fotsiny ao anaty menaka amandy kely ary apetaho eo amin'ny hodi-dohanao ny mifangaro. Fanorana. Araho tsy tapaka ity fomba ity mandritra ny roa herinandro farafahakeliny.
Ahoana ny fiasan'ny juniper : Manana menaka astringent ny menaka jiper. Ny menaka jiriper dia afaka manamafy ny fakan'ny volo amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fitomboan'ny volo. Raha manisy menaka juniper amin'ny loha ianao dia azonao atao ny misoroka ny fivakisan'ny mony amin'ny loha. Izany dia satria ny fananana antiseptika an'ny menaka manitra dia manakana ny fitomboan'ny bakteria miteraka mony amin'ny loha. Izy io dia misoroka ny loto tsy hangonina ao anaty folikelika ka hikatso ny fivakisan'ny mony.
Nandritra ny taranaka maro nifandimby, ny menaka voanio dia nohajaina ho fanafody an-trano majika amin'ny olan'ny volo.
Afanaina ny diloilo voanio 2 sotrokely, ampio ny ranom-boasarimakirana iray sy tantely iray sotrokely. Afangaro tsara ary apetaho amin'ny volo sy hodi-doha . Miandry adiny iray na mahery dia sasao amin'ny shampoo tsy misy sulphate. Afaka manampy anao izany manala dandruff .
Afangaro miaraka ny menaka voanio sy akondro masaka. Manampia kely voaniho amin'ny fangaro. Apetaho amin'ny volo sy hodi-doha. Avelao hiala sasatra mandritra ny fotoana maharitra ny fangaro ary avy eo esory ny shampoo. Ity dia fanafody tsara fanoherana ny volo.
Afangaro amin'ny menaka voanio ny atody sy tantely iray sotrokely. Manotra amin'ny volo sy ny loha. Miandrasa mandritra ny roa ora hahazoana tombony lehibe indrindra. Shampoo toy ny mahazatra. Ity dia fanafody an-trano tsara ho an'ny volo simba /
Afangaroy amin'ny menaka amandy, menaka argan ary yaorta iray sotro ny menaka voanio. Apetaho tsara amin'ny volonao sy ny loha ity maska ​​ity ary tazomy mandritra ny alina. Sasao ny ampitso. Ity fahazarana ity dia hampisy famirapiratana ho an'ny volo volo.
Ahoana ny fanampiana ny menaka voanio : Misy antony maromaro mahatonga ny olona mihira paeans amin'ny voanio mandritra ny taona. Ny asidra matavy rojo sy ny asidra laurika ary capric dia manome antoka ny fananana antimicrobial sy anti-fungal manan-karena amin'ny voanio ary ireo no tena takiana mba hisorohana ireo radikaly maimaim-poana amin'ny fitomboan'ny volo. Ny menaka voanio koa dia miantoka ny volo mamirapiratra sy mainty.
Fitsaboana ao an-trano ho an'ny Dandruff
4. Manakana ny olan'ny volo ve ny fitsaboana an-trano amin'ny fitomboan'ny volo amin'ny alàlan'ny menaka Castor?
Manampia voa eraky ny sotrokely voa methi amin'ny menaka Castor 6 sy sotrokely tsirairay avy. Afanaina ilay fangaro mandra-pivadika volontany kely ary manomboka mihosin-javatra. Ampangatsiahivo izy ary afaho amin'ny hodi-dohanao sy ny volonao. Andraso mandritra ny 45 minitra dia sasao. Ampiharo ity fangaro ity farafahakeliny indroa isan-kerinandro mba hahazoana tombontsoa lehibe indrindra.
fanaova soda ho an'ny hoditra marina
Raha tena volo volo ianao, ity sarontava ity no karazana fanafody an-trano mety aminao. Makà menaka castor 5 sotrokely sy menaka tsinapy 2 sotrokely, izay fahita any an-dakozia izany. Afangaro tsara ary kosohy ny loha sy ny volonao mandritra ny folo minitra. Sasao rehefa afaka kelikely.
Ahoana ny fiasan'ny solika castor : Nampiasaina tamin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny fitsaboana ny hoditra malemy sy ny fihintsanan'ny volo. Ny menaka Castor dia manankarena amin'ny proteinina, mineraly ary Vitamin E ary noho izany dia miasa ho toy ny ody majika ho an'ny volonao izy. Ankoatr'izay, ny menaka castor dia manana asidra ricinoleic sy asidra matavy Omega 6 ilaina, izay mampisondrotra ny ra amin'ny loha, ka mampitombo ny volo. Ny menaka Castor koa dia azo ampiasaina hiatrehana ny sisiny misaraka.
Fitsaboana an-trano 6 voaporofo fa very volo
5. Afaka miantehitra amin'ny fitsaboana an-trano ve isika mba hitomboan'ny volo miaraka amin'i Shikakai sy i Reetha?
Azonao atao ny manamboatra vovoka shikakai ao an-trano amin'ny fanamainana ny fotony amin'ny masoandro mandritra ny andro vitsivitsy ary avy eo fikosehana azy ao anaty mixeur. Makà 2 tablespoons an'ity vovoka ity dia ampio amin'ny menaka voanio iray siny. Tehirizo amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maizina mandritra ny 15 andro ilay fitoeran-javatra. Ahintsano alohan'ny hampiasana azy. Ampiasao ity hanorana ny hodi-dohanao farafahakeliny indroa isan-kerinandro.
fanesorana ny endrika volo ao an-trano
Ahoana ny fiasan'ny shikakai : Ity dia noheverina ho fanafody an-trano mahomby amin'ny karazana olana amin'ny volo. Noho ny fananana fanadiovana volo mahafinaritra dia matetika no heverina ho safidy voajanahary amin'ny shampoo. Manankarena otrikaina sy vitamina A, C, K, ary D izy io, izay mitazona ny volo ho velombelona.
Sasao amin'ny reetha (savony)
Makà savony sy teboka shikakai maromaro. Andrahoy amin'ny rano 500 litatra izy ireo. Ajanona mandritra ny alina ny fangaro. Araraoty ny fangaro ary ampiasao ho toy ny shampoo. Mampiasà tsy tapaka ary gaga amin'ireo tombontsoa marobe.
Ahoana ny fiasan'ny reetha : Reetha dia saponin, izay tompon'andraikitra amin'ny fihazonana ny volonao ho salama.
6. Inona avy no soa azo avy amin'ny fanasitranana ao an-trano amin'ny fitomboan'ny volo amin'ny aloe vera ho an'ny volo?
Raha manana volo matavy ianao, ny aloe vera dia mety ho mpamonjy. Manampia ranona voasarimakirana 5 nilatsaka sy diloilo dite 2 nilatsaka ary afangaroy amin'ny sotrokely 3 aloe vera gel . Manotra an-doha an'ity amin'ny lohanao. Sarony ity masonao ity ary avelao hijanona mandritra ny 30 minitra. Esorina ny shampooing, ampiasao ihany koa ny «conditioner». Ny menaka hazo dite dia mety hihetsika amin'ny aretin-doha.
Alona anaty rano mandritra ny alina ny sotro metasy 2 sotro fihinanana. Afangaro ireo voa malefaka mba hamoronana paty malama. Afangaroy ity gel aloe vera 3 sotro ity. Apetaho toy ny sarontava volo ity ary tohizo mandritra ny 45 minitra. Esorina ny shampooing. Ity dia mety ho saron-tava fanoherana volo tsara.
Ahoana ny fiasan'ny aloe vera: ny aloesy vera dia manana tombony marobe amin'ny hoditra sy ny volontsika indrindra noho ny atiny matanjaka. Manankarena asidra matavy, vitamina, asidra amine ilaina ary mineraly toy ny zinc sy varahina izay fantatra amin'ny fitomboan'ny volo.
7. Ahoana no fomba hanampian'ny fanafody any an-trano ny vinaingitra Apple Cider?
Ity sarontava ity dia afaka manampy amin'ny fifehezana ny diloilo ao anaty loha sy ny loha. Atambatra ny antsasaky ny kapoaky ny vinaingitra paoma miaraka amin'ny voasarimakirana voasarimakirana. Apetaho eo amin'ny hodi-dohanao ary avelao izy mandritra ny 20 minitra. Izany dia hanampy ny fifangaroana handraoka menaka be loatra avy amin'ny hodi-dohanao. Sasao amin'ny rano.
Ampio tsimoramora ACV amin'ny antsasaky ny kapoaky ny tany feno. Manaova paty matevina. Manampia ranona voasarimakirana vitsivitsy ary afangaro tsara. Sarony feno amin'ity maska ​​ity ny volonao. Afaka manasa rano ianao na afaka manosotra azy.
Ahoana ny fiasan'ny ACV : Izy io dia manana akora mety tsara ho an'ny volo matanjaka sy mahery - Vitamina C, Vitamin B ary asidra acetic. Ny vitamina C dia fantatra amin'ny ady amin'ny radika maimaika sy ny dandruff. Vitamina B dia afaka manampy amin'ny fivezivezivezy tsara kokoa. Ny asidra acetic dia afaka manampy amin'ny famoahana ny volo amin'ny akora simika, mikraoba ary bakteria manimba.
8. Ahoana no ahafahantsika manamboatra fanafody any an-trano mba hitomboan'ny volo amin'ny saron-tava atody?
Azonao atao ny manamboatra volo mandoko mamirapiratra amin'ny atody sy yaorta fotsiny. Makà atody 2 sy yaourt vaovao 2 sotrokely (karazana tsy misy lafarinina ihany) hanaovana paty. Apetaho ho sarontava volo, ary miandry 30 minitra farafahakeliny. Esorina ny shampooing.
Ity iray ity dia afaka mamelona ny volonao toy ny zavatra rehetra. Makà atody 2, tantely 1 sotro fihinanana ary ronono 2 tablespoons. Afangaro tsara. Sarony ity ny volonao. Miandrasa mandritra ny 30 minitra vao kobanina amin'ny shampooing.
Ahoana ny fiasan'ny atody: Satria ny volo dia voaforona proteinina keratin 70 isan-jato, ny atody dia azo ampiasaina hanarenana ny volo simba sy maina ka hahatonga azy io malama sy hamandoana. Ny atody dia tsara amin'ny karazana volo rehetra. Ireo dia mety amin'ny famelomana volo fotsiny. Raha ny marina, ny fanafody ao an-trano ho an'ny volo dia tokony ahitana atody.
FAQ: Fanasitranana any an-trano amin'ny fitomboan'ny volo
Q. Tena ilaina ve ny fanosorana menaka manitra ao an-trano?
TO. Eny. Ny menaka dia azo antoka fa singa fototra iray amin'ny fahazarana fikolokoloana volo. Ny menaka dia afaka miditra amin'ny volo volo amin'izay, mitondra hydration ary hisorohana ny fahasimban'ny volo. Saingy misy fampitandremana: ny vokatra sasany toy ny menaka voanio dia manana fananana azo tsapain-tanana ary afaka mihidy amin'ny hamandoana raha avela ela loatra ary mety hiteraka fahatapahana bebe kokoa. Izy io koa dia mety hiteraka fanehoan-kevitra mahazaka an'ireo izay manana hoditra marefo. Na izany aza, ny fomba mahazatra amin'ny fanosotra menaka dia azo arahina am-pitandremana, aorian'ny fakan-kevitra amin'ny matihanina amin'ny volo. Ohatra, fanorana menaka mafana , raha atao amin'ny fomba mety dia mahavita fahagagana. Ny fanorana menaka mafana dia voalaza fa mahasoa kokoa noho ny fanorana menaka mangatsiaka satria ny hafanana dia afaka manamora ny fivezivezy ao amin'ny rà, amin'izay mampitombo ny famatsian-tsakafo ny follicle volo. Ny volo koa dia mandray tsara menaka kokoa rehefa mafana. Aza mafana loatra satria mety hanimba ny otrikaina izany. Aza manomboka mihosotra menaka volo, indrindra raha manana volo menaka ianao. Manantona mpitsabo volo mialoha.
lisitr'ireo sarimihetsika tantaram-pitiavana
P. Inona avy ireo sakafo tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny volo?
TO: Ny fametrahana saron-tava ho volo ho fanafody any an-trano dia tsara, saingy tsy maintsy miady amin'ny fahasimban'ny volo koa ianao ao anatiny. Tsy feno ny fahazarana fikolokoloana volo raha tsy misy ny sakafo ilaina amin'ny fahasalamanao volo. Ohatra, ny otrikaina sasany toy ny proteinina, Vitamin B12, biotin, asidra matavy Omega 3, vy ary Vitamin E dia tsara hampiroborobo ny volo. Noho izany, manontania dokotera voalohany ary avy eo misafidiana sakafo misy atody (proteinina sy biotine), legioma (vy), voanjo sy masomboly (asidra matavy Omega 3), avokado (Vitamina E) ary voamaina sy hena iray manontolo (Vitamina B ). Mazava ho azy fa tsy lisitra feno amin'ny sakafo tsara indrindra amin'ny fitomboan'ny volo izany. Manantona mpitsabo amin'ny sakafo ho an'ny safidy bebe kokoa. Raiso ny sakafo manankarena amin'ny proteinina, biotine, Vitamin B, Vitamin B 12 ary Vitamin E.
Sokajy Fitness Tsy Maintsy Jerena Fahasalamana
Ny solomaso solosaina tsara indrindra amin'ny endrika endrika, raha ny filazan'ireo celebs ankafizinay
Ity Quirky Talk Show ity dia nahazo isa 19% tamin'ny Tomaty lo - ary izany no zavatra tsara indrindra hitako nandritra ny taona
The Insider's Guide to Rockaway Beach
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hijerena ny première 'The Handmaid's Tale' Season 2 Premiere
Ahoana ny fomba hanamboarana Margarita an-trano toy ny Pro manontolo
Fomba fanaovana bereta… Tsy misy toa ny endri-tsarin'ny sary miaina frantsay
Um, Fa maninona no mikiakiaka ny saka?
Ireo vokatra fitomboan'ny volo 9 tsara indrindra, hoy ny Dermatologists
Ny fialanao amin'ny faran'ny herinandro manaraka: Bucks County, Pennsylvania
Ireo mpankafy an'i 'Ramatoa. Fangatahan'i Doubtfire 'Misy Version Mazava Izay Tsy hitantsika mihitsy (& Manamafy ny talen'ny fisian'ilay isa notapahina R ny Tale)
Ny 18 amin'ireo lamba manarona akanjo ambony indrindra naoty hitafy amin'ity fahavaratra ity
Ny kiraro ho anao amin'ny fiaraha-miasa Deme x PAIO Footwear
Vaovao Momba Ny Lamaody
Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika
Mpinamana Sy Fianakaviana
Amboary Eo Noho Eo
Ilay horonantsary # 1 amin'ny Netflix dia… Tsy nampoizina tokoa (& Fiverenana lehibe)
Toeram-pisakafoanana 17 tsara indrindra miaraka amin'ny sakafo any ivelany any San Francisco
Akanjo mpampakatra 9 Nordstrom ambany $ 200 izay mahafatifaty raha ny marina
Iza Moa Izahay?
Famaodinam-Behivavy, Hatsarana, Lifehaki Ary Resa-Po
Lamba 5 izay mahatonga ny static amin'ny ririnina ratsy indrindra (ary ny 2 tsy manao izany)
Priyanka Chopra dia mizara sary tsy fahita firy an'ny reniny miaraka amin'ny fanomezam-boninahitra manaitra
teny mampihomehy amin'ny andro reny
toro-hevitra vitsivitsy amin'ny fitomboan'ny volo
toro-hevitra momba ny makiazy ho an'ny maso volontsôkôlà
zaridaina voninkazo tsara tarehy eran'izao tontolo izao
ny fomba fampiasana lalàn'ny manintona ny fitiavana
Copyright © Zo Rehetra Voatokana | siminbehbahani.com | Politika Fiarovana Fiainan'Olona